Mohamed Salah oo huriyay shakiga la xiriira mustaqbalkiisa Liverpool & halka uu doonayo inuu u dhaqaaqo oo uu sii qishay – Gool FM
Mohamed Salah oo huriyay shakiga la xiriira mustaqbalkiisa Liverpool & halka uu doonayo inuu u dhaqaaqo oo uu sii qishay
Haaruun March 30, 2021
(Liverpool) 30 Maarso 2021. Laacibka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa mar kale dab ku shiday mustaqbalkiisa Anfield, isagoo ka hadlayay suuro galnimada uu ugu dhaqaaqi karo kooxaha ka dhisan dalka Spain.
Weeraryahanka Masaarida ah ayaa qiray inuu jeclaan lahaa inuu u dhaqaaqo dalka Spain si uu uga soo ciyaaro halkaas, xilli dhowr jeer lala xiriiriyay kooxaha ugu tunka weyn dalkaas ee Real Madrid iyo Barcelona.
28-jirkan ayaa noqday xiddiga ugu muhiimsan Liverpool tan iyo markii uu xagaagii 2017 kusoo biiray safka Macallin Jurgen Klopp isagoo dhaliyay 119 gool kaddib 192 kulan oo uu u saftay Reds, waxaana uu ka caawiyay ku guuleysiga Champions League iyo Premier League.
Iyadoo qandaraaska Salah uu dhacayo xagaaga 2023, haddana xiddigan ayaa shaki badan galiyay mustaqbalkiisa xilli uu wareysi siinayay majaladda MARCA isagoo qiray inay suuro gal u tahay inuu u hayaamo kooxaha ka ciyaara La Liga.
“Maxaa diidayo? Cidna ma oga mustaqbalka” ayuu yiri Salah, waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu yiri: “Sidaas darteed… waa laga yaabaa maalin uun, haa, ma ahan mid igu xiran”.
Dhanka kale, Salah ayaa la weydiiyay xiriirka kala dhexeeya tababarahiisa Klopp, waxaana jawaabtiisa uu kusoo koobay inuu ka dhexeeyo xiriirka caadi ahaan ka dhexeeya laba shaqsi oo xirfadley ah.
Maxaa kasoo kordhay xaaladda dhaawac ee Phillipe Coutinho?... (Rajada uu garoommada ugu soo laaban karo dhowaan oo...)
RASMI: Inter Milan oo iska baddeshay calaamaddeeda & astaanta cusub ee ay sameysatay oo lasoo bandhigay